BANIKELE NGEZIGIDI ZOKULWISANA NECOVID-19 OSOMABHIZINISI – Sivubela intuthuko Newspaper
Usomabhizinisi iVivian Reddy amukelisa isheke lezimfonyo kuNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye noNgqongoqshe woMnyango wezeMpilo esifundazweni iKwaZulu Natal uNomagugu Simelane-Zulu
ABENHLANGANO iSibaya Community banikele ngezinsiza zokuvikela ubhubhane iCovid-19 nokuyizimfonyo.USihlalo walenhlangano ophinde abe usomabhizinisi odumile eThekwini namaphethelo uVivian Reddy wamukelise isheke kuNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye noNgqongoqshe woMnyango wezeMpilo esifundazweni uNomagugu Simelane-Zulu.
Zilinganiselwa ku-300 000 izimfonyo enikele ngazo lenhlangano nezidle imali elinganiselwa ku-R4,5 million wezigidi zamarandii. UReddy uthe isinqumo sabo basithathe emva kokuzwa ukuthi kunezindawo ezishoda ngezimfonyo.
“Ucwaningo luveza ukuthi ukufaka izimfonyo enye yezindlela esebenzayo ukuvimba ukusabalala kwegciwane. Emva kokuzwa ukuthi kunokushoda kwezimfonyo sibone kufanele singenelele. Kuthina akukho okubalulekile okudlula ukuhlenga izimpilo zomphakathi,” kusho Reddy.
Lo somabhizinisi uqinisekise ukuthi lezimfonyo bazozidlulisela kuhulumeni wesifundazwe bese uzidlulisela emphakathini nakulabo abazidingayo njengabahlengikazi, odokotela,isemitholampilo nakulabo abasebenza emphakathini. UReddy uphinde wadlulisa umyalezo emphakathini nakubasebenzi.
“Ngifisa ukubonga kulabo abasebenzayo ngalesikhathi nabenza umsebenzi omuhle, ngiyathemba lezinsiza esizikhiphayo zizokwazi uiubavikela kulolubhubhane. Okwesibili ngifisa ukukhumbuza umphakathi ukuthi umuntu unomphefumulo owodwa ngakho ke kumele akuhloniphe lokho. Abantu abajwayele ukuqhelelane baphume emakhaya ngoba kunento ebalulekile abayoyithenga.
Lokhu kuza emva kokuba inhlangano iVivian Reddy Foundation isanda kunikela ngamanabukeni nemiswibela engadla imali engu-R700 000 kuhulumeni wesifundazwe ngasekuqaleni kwaleligciwane.